Le p'tit blanc -- ku-Cabot Trail - I-Airbnb
Le p'tit blanc -- ku-Cabot Trail
Petit Étang, Nova Scotia, i-Canada
I-indlwana ephelele ibungazwe ngu-Jaron
Itholakala ku-Cabot Trail esabekayo, i-Le P'tit Blanc ihlezi egqumeni elincane imizuzu ukusuka ekungeneni kwe-National Park. Njengoba zizungezwe izimfunda ezinokuthula nokubukwa kwe-panoramic kwezindawo eziphakeme, izivakashi ziyakwazi ukuhlehla futhi ziphumule ngenkathi zihamba ibanga elifushane ukusuka kumabha nezindawo zokudlela zase-Chéticamp. Imizuzu emi-5 kuphela ukuya ogwini! Kukhona Isitolo Esijwayelekile esithwala yonke into kusukela ekuthengeni kuya ezintweni zokukhempa (nokunye okuningi) esivula sekwephuzile -- ukugxumagxuma kuphela, ukweqa kanye nokugxuma usuka endlini.
Isimo esifudumele, esinamakhanda angathandeki emlandweni wesifunda, silinganiswa yizinsiza zesimanje kanye nesakhiwo samanje. Ikamelo ngalinye line-vibe yalo, eligeleza ngokuzwana endlini yonke. Amakamelo amaningi anezinketho ezihlukene zokukhanyisa nama-dimmers ukuze izivakashi zikwazi ukwenza ngendlela oyifisayo ukuma kwenhliziyo ukuze kufane ne-tempo yazo. Ngobuhle bayo basezindaweni zase-Cape Breton kanye nezinhlamvu eziningi, okuhlanganisa izitini eziveziwe, imishayo yekhulu leminyaka kanye nezinto zakudala, i-Le P'tit Blanc izokwenza ukuhlala kwakho kukhetheke kakhulu.
Indawo enobungane, iphephe kakhulu, ithule, ivulekile futhi inomoya. Amakhaya amancane ama-acadian amahle akhiwe eduze kwesiza esinokuthula, futhi anemibono yetheku laseSaint Lawrence kanye nezintaba. Umoya omusha wasolwandle ushanela amasimu, utshani obuluhlaza nezingadi ezinikeza indlu indawo komakhelwane kanye nomuzwa wokuba yimfihlo emphakathini oqinile we-nit.
Ngiyasithanda isifunda sami -- isimo saso nesiko. Ngingathanda ukwabelana nezimfihlo zayo nezivakashi zami futhi ngiphendule yonke imibuzo yazo ukuze ngiqinisekise ukuthi izidingo zabo ziyahlangatshezwa ukuze zikusebenzise ngokugcwele ukuhlala kwazo esiqhingini sase-Cape Breton.
Ngiyasithanda isifunda sami -- isimo saso nesiko. Ngingathanda ukwabelana nezimfihlo zayo nezivakashi zami futhi ngiphendule yonke imibuzo yazo ukuze ngiqinisekise ukuthi izidingo…
Hlola ezinye izinketho ezise- Petit Étang namaphethelo